Ao Amin’ny Tongasoa Ny Lohataona, Filahiana Goavana Mandehandeha Amin’ny Lalamben’i Japan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2016 7:37 GMT
Mitondra ilay sampy lahy iray matory hampihaona amin'ny vavy mitovy karazana aminy. Isan-taona isaky ny 15 marsa, mifanandrify amin'ny miraalin'ny lohataona, Tontosaina ao amin'ny Doany Tagata ao Komaki ny Fetibe Hōnen . Sary avy amin'ny mpisera YouTube 谷古宇正信.
Amin'ny fomba nentim-paharazana kristiana, manamarika ny fitsanganan'i Kristy ho velona indray ny Paska. Misy ny manampahaizana sasantsasany milaza fa ny fety, izay mitontona manodidina ny miraalin'ny lohataona dia manana herim-pitarihana sasantsasany avy amin'ny jentilisa na talohan'ny vanim-potoana kristiana. Ohatra, amin'ny firenena tandrefana sasantsasany ny fetin'ny paska dia aseho amin'ny alalan'ny atodim-borona nolokoina sy ny bitro—samy mariky ny fahavokarana izy roa ireo sy fampanantenan'ny fahaterahana indray ao amin'ny lohataona— izay nampiasain'ny Saxons taloha tao Eoropa Avaratra, fony mbola nanompo ny andriamanibavy Oestre (na Eostre) ry zareo.
Ao amin'ny Doany Tagata (田縣神社, Tagata Jinja), ao Komaki, tena eo avaratr'i Nagoya indrindra, ao afovoan'i Japan, miridiridy ny fampiasana ilay marika; tsy misy ny fivelezana manodidina ny kirihitra, raha voasolotenan'ny filahiana lehibe iray vita amin'ny hazo ny vavaka ho amin'ny fahavokarana sy ny taona zina ho amin'io taona ho avy manaraka io.
Tamin'ny voalohany ny Takeinade, ny andriamanitra lahy, dia naseho tamin'ny alalan'ny sarin'olona vita amin'ny mololo miaraka amin'ny filahiana kely vita amin'ny hazo. Nandeha ny fotoana, nampivoatra ny Takeneinade ny fetibe ary nosaronana tambanin'ny doany finday mikoshi ny filahiana vita amin'ny hazo.
Niverina ao an-tranony ao amin'ny Doany Ogata eo amin'ny lalana i Tamahime-no-mikoto.
Afaka manavatsava ny Fetiben'ny Honen ianao ao amin'ny Instagram sy ny Twitter amin'ny fampiasana ny diezy #tagatashrine, #田県神社 ary #豊年祭.